မြောက်ကိုးရီးယားလို သဘောမထားပါနဲ့ဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြောက်ကိုးရီးယားလို သဘောမထားပါနဲ့ဗျာ
Posted by kknight on Dec 30, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
မြောက်ကိုးရီးယားကို အားကိုးအားထားပြုနေတဲ့ ဆရာတင်ပူဇော်ထားတဲ့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အခု မြောက်ကိုးရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ သေဆုံးခဲ့တာ မြင်ရတော့ ဝမ်းနည်းကောင်း ဝမ်းနည်းပေလိမ့်မည်။ သို့သော် လက်ရှိ မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်သစ် ကင်ဂျုံအွန်က မြန်မာအစိုးရတွေ သဘောကျစေမဲ့ မိန့်ခွန်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ မိုက်မဲတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းက နိုင်ငံရေးသမားတွေရော ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်တွေပါ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုမှ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ လို့ ယုံကြည်မှုအပြည်နဲ့ ခိုင်မာတည်ကြည်စွာ ကြေငြာအပ်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။
ကဲ….မြောက်ကိုးရီးယားငရဲခန်းတွေဟာ ဆက်လက် တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲမီးတွေဟာလည်း ဆက်လက်တောက်လောင်နေအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားကို ဆရာတင် ပူဇော်ပသနေတဲ့ မြန်မာ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကော ပြည်တွင်းစစ်ငရဲခန်းတွေ ပညာမဲ့ ဆင်းရဲသား ဒုက္ခသည်တွေကို ဒီတိုင်းပဲ ဆက်လက် ဖြစ်စေဦးမှာလား။ ပညာတတ် စိတ်ထားမြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ငရဲခန်းတွေ ဖျက်သိမ်းပြီး ဆင်းရဲမီးတွေ ငြိမ်းစေမှာလားဆိုတာကတော့…………….
kk night has written2post in this Website..
The merchant of death who alives not dead.
View all posts by kknight →
မြောက်ကိုရီးယားကိုတခြားနိုင်ငံတွေကသာမုန်းနေတာ။ သူတို့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအီသေတော့ သူတို့ နိုင်ငံ သားတွေငိုလိုက်ကြတာ။ တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ။ စိတ်မနာကြဘူးလားမသိဘူးနော်။ အူလှိုက်သည်း လှိုက်ကိုငိုနေတာ။ ဒို့ဆီမှာများဦးသန်းရွှေသေရင်ငိုမဲ့လူသူ့မိသားစုကလွဲလို့ရှိမယ်မထင်။
ကမ္ဘာကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ.. မြောက်ကိုရီးယန်းတွေ.. သိကြတယ်လို့..မထင်မိဘူး..
သူတို့မှာ.. အင်တာနက်လည်းမရှိ..။ ဆက်တလိုက်တီဗီလည်း မကြည့်ရဘူးလေ…
အဲလောက်တောင် လုပ်လို့ ရတယ်လား..
ထူးဆန်းတယ်နော်.. ဒီမှာ လိုင်းနှေးပေမဲ့ သုံးခွင့်ရတယ်။
ကျုပ် တို့ ဆီ က အများကြီး နေလို့ ကောင်းသေးဗျာ
မြောက်ကိုရီးယားမှာ လူမဖြစ်လို့ 
အဲလိုဂျီးလား ငမျောက် ကိုရီးယားရယ်
ကျေးဇူးပါ ကခင်ညွန့် နဲ့ .ကသိန်းစိန်ရေ
မြောက်ကိုရီးယားမှာ အင်တာနက်မရှိပေမဲ့ ပြည်တွင်းသုံးကွန်ယက် အင်ထရာနက် ရှိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ အစိုးရ ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးပုံရတယ်။ အများပြည်သူကိုတော့ ပေးသုံးပုံမရဘူး။ အနေအထားကြည့်ရတာ ရေဒီယိုတောင် ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပိုင်ရမယ်ထင်တယ်။ (မြန်မာပြည်မှာလည်း ရေဒီယို၊ တီဗွီလိုင်စင် မဆောင်ရင် အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လက်တွေ့တော့ မသုံးသလောက်ပါ။ အတိုက်အခံတွေကို အပြစ်ရှာမရရင်တော့ သုံးတတ်တယ်။) တောင်ကိုရီးယားဖက်မှနေ ဂြိုလ်တုလက်ကိုင်သုံးဖုံးတွေ ခိုးသွင်း၊ ရေဒီယိုတွေခိုးသွင်းပြီး သတင်းတွေ ပို့ပေးကြတယ်။ ကူမြူနစ် မြောက်ကိုရီးယားကနေ အငတ်ဘေးကြောင့် ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေကို အကူအညီပေးတာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ထည့်မတွက်ရင် ဘယ်အိမ်နီးချင်းငံလည်းသိလား……ကူမြူနစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးမုံလေးတို့ အမျိုးတရုတ်ကြီးကတော့ ထွက်ပြေးသူတွေမိရင် ကိုယ်ချင်းမစာ ပြန်ပို့တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြောက်ကိုရီးယား အနွယ်ဖွား သုံးသိန်းလောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။ သူတို့ကနေ မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ပုံမှန်ငွေလွှဲထောက်ပံ့တယ်ပြောတယ်။ သူတို့အကြောင်း သဂျီး၊ ကိုသစ်၊ မောင်ဂီတို့ သိရင်ပြောကြပါအုံး။
အင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်နာရကောင်းမှန်းမသိတာ။ သနားစရာ။ သူတို့လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး ကကျတော့နိုင်ငံခြားဖြစ်မှသုံးတယ်ကြားဖူးတယ်။ တော်တော်မတရားတာပဲ။
မြောက်ကိုရီးယားတွေ ငိုပြနေရတာ ငိုပြနေရတာ .. ငို ချင်လို့မဟုတ် .. မငိုပြရင် နောက်နေ့ ရာရှင် မရမှာစိုးလို့..